Ukuphupha uAdam noEva Discover ▷️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
UAdam noEva, ngokwamabali eBhayibhile, ngabazali bokuqala boluntu, esingabalandeli bakhe. UThixo wabadala aba babini njengamadoda akudala: owokuqala uAdam kunye nobambo lwakhe uEva. Ibali lendalo lendalo liyaziwa kakuhle, ke akunamsebenzi ukutolikwa kwephupha nokuba umntu uyakholelwa na okanye akakholelwa. Wonke umntu angaphupha ngala maKristu "abazali bokuqala", athetha ntoni amava anjalo ephupha?
1 Uphawu lwephupha «uAdam noEva» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uAdam noEva» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uAdam noEva» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uAdam noEva» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukubona uAdam noEva beparadesi, umyezo wase-Eden, kuthathwa njengelinye lawona maphupha amyoli umntu anokuwaba nawo. Isimboli siyathembisa okuhle kodwa kwaye ibonisa ubomi obusempilweni nobungenaxhala. Akukho nto kubomi bemihla ngemihla yamaphupha enokuthi imcaphukise, izicwangciso zakhe ziqhutywa ngokokuthanda kwakhe kwaye uyabonwabela ubomi.
Ukongeza, uphawu "uAdam noEva" nalo impumelelo Iintengiso ezizezakho okanye ezobuchwephesha kwindalo. Mhlawumbi iphupha eli linxulumene nobomi bothando obonwabisayo balo mntu kuthethwa ngaye okanye iinzuzo zemali oza kuzifumana kungekudala.
Nangona kunjalo, kukho iimeko ezithile zamaphupha apho uAdam noEva banokulumkisa ngento ethile: ukuba ubona uAdam enegqabi lomkhiwane kunye noEva enenyoka esinqeni sakhe, kuya kufuneka ulumke kwikamva elikufutshane. Abantu abakhohlakeleyo Lumka. Ugrogrisa ukuthandana nezinto ezithile ngokulula kwaye ke ukhokele ubomi bakho kwicala elingathandekiyo.
Nokuba uEva uthetha nenyoka ephupheni, oku kunokuba phambi kwayo. ukonakalisa ukulumkisa. Kungenzeka ukuba umntu obhinqileyo ophuphayo akuxhaphaze ngokwezimali okanye awonakalise igama lakho elihle eluntwini. Kuya kufuneka ucinge kabini ukuba ngubani onokumthemba.
Uphawu lwephupha «uAdam noEva» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokusisiseko, uAdam noEva baqulathe iphupha ngokokuqonda kwengqondo ngabazali bakho. Kwangelo xesha, nangona kunjalo, bayayifuzisela loo nto emasimini y amalungu ababhinqileyoezenza ubuntu bomntu ngamnye. I-subconscious iyazinyamekela ezi zinto ngephupha kwaye ikhokelela ephupheni kulwazi lokuzazi, olubaluleke kakhulu kubomi bokwenyani, amandla okwenza izigqibo nokwenza izigqibo.
Ngaphaya koko, abanye oochwephesha bengqondo bacinga ukuba uphawu lwephupha "uAdam noEva" nalo Umonde unokululeka. Ezinye izinto ebomini zifuna ixesha lokukhula. Umphuphi akufuneki aphoxeke ngokukhawuleza ukuba akayiboni impumelelo kwinzame ezithile, kuba ekugqibeleni iminqweno yakhe isazalisekiswa.
Uphawu lwephupha «uAdam noEva» - ukutolika kokomoya
UAdam noEva bakwanabo nabazali bethu bokuqala ngokomoya. Kwangelo xesha, incoko no-Eva inokuba sisalathiso se ukukhohlisa ngokomoya icandelo.